तातो प्लेट र ओवन एक ठाँउ: केही मानिसहरू प्रत्येक प्लेट दुई भागहरु हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई विचार। ती एक पटक एक मा संयुक्त छन्। अब यी "Siamese जोडाहरू" साझेदारी गर्न समय। कुनै ओवन चुलो - परिणाम एक Hob थियो। किन आवश्यक छ? बिक्री मा के छ Cooktops बिजुली? के चयन गर्न राम्रो छ?
किन Hob किन्न
भान्सा डिजाइन अब ध्यान धेरै तिर्ने छ। सबै सुन्दर, मौलिक र, सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, सहज हुनुपर्छ। विभिन्न भान्सा सेट आवास एकाइहरूको धेरै विकल्प सुझाव। सबै Housewives ओवन मा खाना पकाउन छैन। यस मामला मा, तिनीहरूले बस आवश्यक छैन छ। वा त्यहाँ उनको लागि कुनै ठाउँ छ।
तर मालिकहरूको चाहनुहुन्छ जब अधिक साधारण विकल्प स्टोभ माथिल्लो भाग र आफै ओवन राख्न। को निर्भर र स्वतन्त्र बिजुली Cooktops यो नेतृत्व। जो राम्रो छ?
निर्भर र स्वतन्त्र
यदि यो Hob कुनै पनि स्थानमा स्थापित गर्न सक्छन् ओवन गर्न सन्दर्भ बिना यो काम, यो एक स्वतन्त्र Hob छ।
यो एक ओवन को समग्र व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित छ भने, तपाईंले निर्भर प्राप्त। के यो प्याकेज प्लेट फरक छ भने? यस भङ्ग भन्ने परम्परा तथ्यलाई "को Hob अन्तर्गत ओवन।" तिनीहरूले व्यञ्जन तत्परता जाँच निरन्तर ओवन गर्न भन्दा मोड छ छैन ताकि, एउटै स्तर मा राख्न सकिन्छ।
तर दुवै यन्त्रहरूको व्यवस्थापन ओवन मा सामान्यतया छ भनेर मनमा राख्नुहोस्। त्यसैले, तिनीहरूलाई नजिकैको अझै पनि छ छ।
एक Hob र एक ओवन छनौट गर्दा आफ्नो अनुकूलता एक निर्भर जोडी भुक्तानी ध्यान सिर्जना गर्न। तिनीहरूलाई प्रत्येक जो संग काम गर्न सक्छन् उपकरणहरू को स्पष्ट सूची छ। कहिलेकाहीं यो नै निर्माता केवल केही उत्पादनहरु छ।
अन्त मा, यो बस स्टाइलिश छ। तर को पाठ्यक्रम, अधिक महंगा। कहिलेकाहीं मूल्य नै मात्र Hob सबै पारंपरिक भन्दा बढी हुन सक्छ ओवन संग चुलो।
पकाउने सतह प्रकार
तिनीहरूले गर्मी स्रोतमा भिन्न र हुन सक्छ:
पहिलो दुई सबै, स्पष्ट केही शब्दहरू भन्न संयुक्त आवश्यकतामा भने। बिजुली वा ग्याँस: तिनीहरूले अक्सर त्यहाँ ऊर्जा प्रकार को एक साथ गल्तीलाई छन् जहाँ क्षेत्रमा सान्दर्भिक छन्। दुई प्लेट किन्न, तपाईं Hob को यस्तो मोडेल खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। ग्यास पाइपलाइन भएका छैन र बोतल ग्याँस प्रयोग ती, उनीहरूले उपयुक्त छन् भने पत्ता लगाउन आवश्यक छ।
उदाहरण इलेक्ट्रोलक्स EHM 6335 र ZANUSSI ZXL 636 ITX समावेश गर्नुहोस्।
चयन गर्दा प्रत्येक खरीदार किफायती ऊर्जा, तिनीहरूलाई को मूल्य, र आफ्नो व्यक्तिगत प्राथमिकताहरू को उपलब्धता द्वारा निर्देशित छ।
निर्मित cooktop धेरै राम्रो र स्टाइलिश देखिन्छ।
खुला ज्वाला बिना।
तपाईं एक मात्रा मा राख्दै द्वारा गर्मी समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ।
धेरै मोडेल निर्दिष्ट समय पछि बन्द गर्न एक घडी छ।
गर्न पकाएको भाँडा न्यानो अब रहन बर्नर बिस्तारै तल शांत।
कमीकमजोरी बीच ऊर्जा र ढिलो ताप बर्नर पुरानो डिजाइन को एक उच्च मूल्य भनिन्छ गर्न सकिन्छ।
बर्नर बिजुली hobs
तिनीहरूलाई को आधुनिक मोडेल तपाईं आवश्यक रूपमा धेरै हुन सक्छ। त्यहाँ विभिन्न बिजुली Cooktops छन्। जो राम्रो छ परिवार आकार र आहार मा निर्भर गर्दछ। सामान्यतया तीन वा चार hotplates। एक ठूलो परिवारको लागि खाने खाना पकाउने लागि, तपाईं पाँच प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। व्यावसायिक र पनि अधिक। तर धेरै मोडेल अनुकूलन विस्तार बर्नर सेट गर्ने क्षमता छ।
र तपाईं आफै बस्नुहुन्छ भने, र पनि तीन दुर्लभ प्रयोग गर्ने? त्यसपछि एक वा दुई छल्ले संग एक मोडेल लिन। यो भान्सा मा स्थान सुरक्षित गर्न मद्दत गर्नेछ। लगभग 30 सेमी को साँच्चै यस्तो सतहहरु चौडाइ।
अनुकूलन विस्तार बर्नर
utyatnitsu र Roaster लागि गोलो खण्ड।
थप क्षेत्रहरु सहित राउन्ड बर्नर, जो वृद्धि गर्न सकिन्छ।
Hotplate बारबेक्यू, ग्रिल, गहिरो fryer।
बर्नर को प्रकार
तिनीहरूले मात्र होइन उपस्थिति र हेरविचार सजिलो, तर पनि व्यक्तिगत व्यञ्जन तयारी, ऊर्जा खपत को राशि, को उपकरण को सुरक्षा को गति निर्धारण।
Rapidnye (सर्पिल) एक ताप भित्र तत्व संग फलाम सर्कल।
तिनीहरूले बिस्तारै गरम छन् र पनि cooled। भाँडा फरक आकार र तल को गुणवत्ता को कुनै पनि (प्लास्टिक भन्दा अन्य) हुन सक्छ। कुनै पनि हालतमा र उपकरण तिनीहरूलाई सफा। यो एक गर्म hotplate चिसो पानी मा कास्टिङ र भारी वस्तुहरु (फट) फेंक गर्न असम्भव छ।
को ग्लास स्वभावका।
यो आधुनिक ऊर्जा बचत मोडेल। तिनीहरूले चाँडै अप गर्मी र बिस्तारै तल शांत। मा हेर्न सुन्दर। बिजुली मुद्दा अँध्यारो ग्लास अन्तर्गत लुकाइएको छ। तर उहाँलाई हेरविचार फलाम भन्दा कठिन लिन। मात्र विशेष उपकरण र खुरचनी (बन्डल उपलब्ध) संग साफ।
साथै पैन को आधार, चेप्टो हुनुपर्छ। गर्मी सीधा गिलास सम्पर्क कि बर्तन मात्र भाग हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यहाँ तल मा unevenness (वा डिजाइन को कमजोरीहरू) छ भने, त्यसपछि ऊर्जा केही यसको गुणस्तर impairing, कुनै tableware ताप र ग्लास तात्दै जान्छ।
चीनी, गर्म ग्लास पग्लिने मा झर्ने र हटाउन गाह्रो हो कि स्थलहरू गठन।
मूल फारम यस्तो बर्नर अरु देखि अलग छ। बस एक गिलास, धातु वा प्लास्टिक प्यानल - पहिलो नजर, सतह मा। भित्र त्यहाँ छैन जहाँ प्रेरणा कुकर लागि आवश्यक विशेष बर्तन (विशेष चिह्नों संग) ती ठाउँमा चिसो छ कि एक हीटर छ। ऊर्जा मात्र तल प्रसारित छ। अन्य त्यो पहिचान र "बातचीत" गर्न तिनीहरूलाई काम गर्दैन गर्नुभयो।
यी hobs बिजुली Cooktops छ। के तपाईं लागि सबै भन्दा राम्रो छ - सामाग्री सम्भावनाहरू र भान्सा डिजाइन आधारमा।
8 20 सेकेन्ड देखि धातु सर्पिल गर्मी।
क्रेप टेप -3सेकेन्ड।
संग ट्यूब निक्रोम spirals हलोजन भरिएको। गरम दोस्रो।
रूप र आकार
बारेमा सानो माथि भने गरिएको छ। मानक आयाम:510 सेमी, चौडाइ 60 सेमी, तर कठिन देखि उचाइ अन्य आकार को एक पकाउने सतह फेला पार्न ..
परम्परागत रंग बोलाउन सकिन्छ सेतो, कालो र इस्पात। तपाईंको भान्सा को डिजाइन गर्न थप उपयुक्त हो कि अरूलाई छन्।
को काम सतह चढाना
इनामेल। त्यो यो सफा गर्न सजिलो छ, परिचित छ। तर छिल को लापरवाह ह्यान्डलिङ देखि उपस्थिति बिगार्छ।
स्टेनलेस स्टील। मजबूत, विश्वसनीय। पानी स्थलहरू छोड्न, यो एक ड्राई स्पन्जले संग सखाप हुनु हुँदैन।
ग्लास-सेरामिक्स। सुन्दर, बलियो, तर तपाईं नियमित यसलाई हेरचाह गर्न आवश्यक छ। आखिर, चुलो को प्रकारको एकदम छैन सामान्य अर्थमा छ। यसको सतह पूर्ण समतल र सहज छ।
यो धेरै होसियार हुनु आवश्यक चासो। एक गिलास-माटोको सतहहरु सिर्जना गर्न गुणस्तर सामाग्री कर्निङ (संयुक्त राज्य अमेरिका) बाट Ceran SchottGlas र उत्पादनहरु मानिन्छ। आफ्नो उत्पादनहरु एक आयत मा राखिएको अक्षरहरू K को उपस्थिति, पहिचान गर्न सकिन्छ।
विद्युत प्यानल GORENJE
आयाम 60h51 संग Hob GORENJE ect 610 SC छ कट ओफ समारोह4बर्नर। खाना स्पर्श को तयारी र व्यवस्थापन गर्नुहोस्। त्यहाँ जो पकाउने क्षेत्र को तापमान अनुमान गर्न अनुमति दिन्छ अवशिष्ट गर्मी सूचक छ। यो एक अपेक्षाकृत सस्ती माटोको Hob छ। 12-19 हजार rubles मूल्य। सतह कोटिंग - ग्लास र माटो को पात्र।
स्वतन्त्र Hob GORENJE आईटी 614 सीएससी महंगा। 6.8 किलोवाट यसको क्षमता। त्यहाँ एक अवशिष्ट गर्मी सूचक, घडी र स्वतः सिस्टम छ। हजार। RUB 25 अप मूल्य। ग्लास माटोको को कोटिंग को साधन को स्पर्श नियन्त्रण गर्न सक्षम बनाउँछ।
बिजुली Cooktops बश
Cooktop बश PKE 645 B17E मा कालो उपस्थिति को "जल" समान छ, तर किनाराको एक धातु फ्रेम द्वारा सुरक्षित छन्। को ताप तत्व नमस्ते-लाइट प्रविधि तत्काल ताप प्रदान प्रयोग निर्मित छन्। स्पर्श नियन्त्रण प्यानल तपाईं 17 शक्ति मोड को एक चयन गर्न अनुमति दिन्छ। यो पनि एक अपेक्षाकृत सस्ती माटोको Hob4बर्नर छ (माथि 14 हजार छ। RUB।)। एक घडी संग स्वचालित बन्द-बन्द सिस्टम तपाईं पकाउने प्रक्रिया पूरा कार्यक्रम गर्न अनुमति दिन्छ।
Cooktop बश PKE 611 B17E अघिल्लो उपस्थिति, समारोह र एक मूल्य धेरै फरक छैन - 11 13 हजार rubles देखि ..
देखिन्छ राम्रो निर्मित Hob Whirpool एसीएम 8084प्रेरणा hobs। ती दुई गोलो आकारको छन्। सबै बर्नर स्वतकेन्द्रित प्रयोग भाँडा लगािन्छ। यो महंगा माटोको Hob छ। मूल्य - 18 32 हजार rubles देखि ..
Hob "इलेक्ट्रोलक्स» EHH 6240 ग4छल्ले एक सानो सानो। यसको आकार 59h52 सेमी। जब जडान 6.6 किलोवाट पावर।
प्यानल कवर - ग्लास-माटोको। त्यहाँ एक स्पर्श संवेदनशील नियन्त्रण र यसको लक को स्वतन्त्रता छ। स्वतकेन्द्रित कार्य प्रयोग गरेर बर्नर भाँडा हो र यो गरम। मूल्य - 14 17.5 हजार rubles देखि ..
के र कसरी एल्यूमीनियम पट सफा गर्न?
स्पेनी Paella - समुद्री संग नुस्खा
सेन्ट व्लादिमीर गरेको गिरजाघर (कीव): फोटो, प्रतीक, र समीक्षा
प्राकृतिक सौन्दर्य - सबै समय को सबै भन्दा फैशन प्रवृत्ति
जर्मन जेट "Messerschmitt-262": सृष्टिको इतिहास, डिजाइन सुविधाहरू, फोटो
TSH हर्मोन आदर्श: विचलन र अलार्म ध्वनि जब को कारण?